ဇော်အောင်(မုံရွာ) - အဂတိနဲ့ အင်န်အယ်ဒီအစိုးရ - MoeMaKa Media
Home / Corruption / Currents / Features / Police Brutality / Zaw Aung (Monywa) / ဇော်အောင်(မုံရွာ) - အဂတိနဲ့ အင်န်အယ်ဒီအစိုးရ
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - အဂတိနဲ့ အင်န်အယ်ဒီအစိုးရ
Corruption, Currents, Features, Police Brutality, Zaw Aung (Monywa)
ငွေမရှိတဲ့ဘဝဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး လို့ ... တခါတလေထင်မိကြမှာပါ။ ရဲအမှုမဖြစ်စေနဲ့ဟေ့။ ရဲနဲ့ မပတ်သက်ချင်ဘူး ... အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ အလုပ်ပျက်၊ စိတ်ပျက်ရတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို မတိုင်ပဲ ပြသနာဖြေရှင်းကြတယ်။ ဆိုင်ကယ်၊ ကား တိုက်မှု ၊ လမ်ပေါ်မှာ ယာဥ်ထိန်းရဲ အဖမ်းမခံရဘူးတဲ့ ယာဥ်မောင်း မရှိပါဘူး။ ဖမ်းခံရတိုင်း ငွေကုန်ရတယ်၊ တနည်းအားဖြင့် လာဘ်တောင်းခံရတယ်။ စကားများများ အပြောမခံချင်ရင် (ပညာပေး၊ ဆုံးမတာ မခံချင်ရင်) .."ကျနော်ကိုကူညီပါ၊ တရားရုံးသွားဖို့အချိန်မရှိလို့ ဆရာပဲ ဒဏ်ငွေပေး ပေးပါခင်ဗျာ။ ငွေလည်းမတတ်နိုင်လို့ အနည်းဆုံးဒဏ်ငွေဖြစ်အောင် ကူညီပေးပါခင်ဗျား" လို့ပဲ ကူညီပါ ဦးရဲကြီး၊ ကိုရဲကြီးခင်ဗျား..လို့ ပြောရပါတော့မယ်။
နိုင်ငံခြားပြန် မြန်မာတွေ အများစုက စကားမပြောချင်ဘူး။ ရဲနဲ့ မပတ်သက်ချင်၊ လာဘ်မပေးချင်ဘူး၊ ဒီစာရေးသူ တခါက အစိုးရဝန်ထမ်းပြေး ဆိုပြီး ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ခံရလို့ အနှစ်၂၀ လောက် မြန်မာပြည်ပြန်မလာဝံပါ။ ခိုင်မာတဲ့သတင်းအရ သမတဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ပြန်လာလို့ရပြီ ရဲမဖမ်းတော့ဘူး သိရလို့ ၂၀၁၁ မှာ အလည်ပြန်လာပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်အမျိုး၊ မိတ်ဆွေများစွာနဲ့တွေ့တော့ ပျော်တာပေါ့။ အပြန်လေဆိပ်မှာ မိမိဇနီး၊ သားသမီးတွေနဲ့ အတူ လေယဥ်ပေါ်တက်ခါနီး၊ လေဆိပ် လ.ဝ.က ထွက်ပေါက်မှာ ထွက်ခွင့်မပေးပဲ လေဆိပ်အရာရှိစားပွဲမှာ ပညာပေးခံဖူးပါတယ်။ စသုံးလုံးရဲမိတ်ဆွေက ရောက်လာပြီး ကူညီတယ်။ တပြားမှမပေးဘူး စိတ်ဓာတ်နဲ့ လေယဥ်ထွက်ခါနီး ၅မိနစ်အလိုထိ တောင့်ခံတယ်။ ပြန်ထွက်ခွင့်မပေးရင် ပြည်ပမပြန်နိုင်၊အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်၊ အရမ်းထိခိုက်နိုင်တာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြန်ရလဲ နေရစ်မယ် တောင့်ခံတယ်။
နောက်ဆုံး လေယဥ်နဲ့​လိုက်ခွင့်ရသွားတယ်။ နောက်မှသိရတာ စသုံးလုံးရဲက လေဆိပ် လ.ဝ.က ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ us$100 ပေးပြီးသား။ မိမိက ခပ်မာမာပဲနေတယ်။ "ကူညီပါခင်ဗျား လို့" .. တပည့်မခံတော့ ပညာပေးတာခံရတယ်။ နိုင်ငံခြားပြန်တွေက ငွေပေါတယ် ဆိုပြီး လ.ဝ.က၊ က.ည.န၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ စတဲ့ဝန်ထမ်းတွေက အရေးပေးခံရတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ငွေ ညှစ်ခံရတယ်ပေါ့။
အစိုးရဝန်ထမ်းများနဲ့ အစိုးရဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်အမတ်များကို ပြောကြတယ်။
"အင်န်အယ်ဒီ အစိုးရလဲ လာဘ်စားပါ။"
"ပြည်သူတွေ ငတ်နေပြီ။ ကုမဏီတွေကို အစိုးရက ကြပ်တာခံရလို့. အလုပ်တွေရပ်ကုန်ပြီ။ စီးပွားရေးကို ဦးစားပေးရမှာ။ အခု စီးပွားရေးကျဆင်း ဆုတ်ယုတ်သွားပြီ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဦးစားပေးတါ အမှားကြီးပဲ။ ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ SME တွေကို ငွေထုတ်ချေးပေးရမယ် "
အပြစ်တင်တဲ့သူ အများစုက ယခင်က စားဝါး နေကျ စားဖားအသိုင်းဝိုင်းက ဖြစ်တယ်။ အင်န်အယ်ဒီ စီးပွားရေးမလုပ်တတ်ဘူး လို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ကို တမ်းတသူများက ပြောကြ ပါတယ်။
အဂတိကော်မရှင် အသစ်ဖွဲ့စည်းပြီး ဝန်ကြီးချုပ်(ပြည်ထောင်စုအဆင့်)၊ ညွန်ချုပ်၊ ညွန်မှုးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဥပဒေချုပ် ..စသဖြင့် ဖမ်းဆီးနေပါပြီ။ တချို့လဲ အလုပ်က ထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပြည်သူတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဥ်မှာအထိ အရမ်းတိုင်ကြပါတယ်။ ဖြေရှင်းပေးတါ များပေမဲ့ အောက်ခြေမှာ အဂတိပြသနာ အများကြီးရှိနေဆဲပါ။ စီးပွားမကောင်းခြင်းက အဂတိများလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖြေးဖြေး အဂတိ တိုက်ဖျက်နေဆဲပါ။
မြင်ရတဲ့အရာကို ဦးစားပေးလို့၊ သမတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် တိုက်တာကြီးတွေ ဝုန်းကနဲ့ ပေါ်လာတယ်။ အကျိုးထက် ဆိုးကျိုးများတယ်။ အဆိုးဝါးဆုံးက အိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်း မိုးပေါ်ထောင်တက်သွားခြင်းပါ။ မြေပိုင်ရှင်တွေ ကျိကျိတက်ချမ်းသာသွားကြတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ အရမ်းသိသာစွာ ခွဲ ခြား တာ ခံလိုက်ရတယ်။
အင်န်အယ်ဒီအစိုးရတက်လာပြီး အထပ်မြင့်တွေ ၆လလောက် ရပ်ဆိုင်း၊ စည်းကမ်းကြပ်မတ်တော့ သူဌေးတွေ အရမ်းဆူပူကြတယ်။ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီ။ နိုင်ငံစီးပွားကျဆင်းကုန်ပြီ စသဖြင့် ဆူပူကြတယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ ရေမြေ အလွန်ပေါမြားတာ အထပ်မြင်တွေ အကြီးကျယ်ဆောက်ပြီး ရန်ကုန် Sq ft 100 ပေ၁၀၀ မရှိတဲ့ တိုက်ခန်းလေးကို သိန်း၂၀၀၀ ကျော် စျေးပေါက်နေတာ သူဌေးတွေ အကြိုက်ပါ။ စင်ကာပူ အလုပ်သွားလုပ်သူ အိမ်ဖော်များ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ် အိပ်မက်ပျောက်ဆုံးရတယ်။ အခု အင်အယ်ဒီအစိုးရလက်ထက် မြိုထဲက တိုက်ခန်းတွေ သိန်း၃၀၀ အောက် စျေးတွေ ကျသွားပါပြီ။ နယ်မြို့တွေမှာ ၄၀ x ၆၀ ပေ မြေကွက်ကို သိန်း ၅၀၀၀ အော်နေသူများ အခု သိန်း၁ထောင်အောက် စျေးချပေးသော်လည်း ဝယ်သူမရှိသေးပါ။ အခုဆို သိန်း၃၀၀ လောက်နဲ့ ဝယ်နိုင်လာပါပြီ။ အရစ်ကျ ​စနစ်တွေလည်း ဘဏ်တိုးနှုံး ကျသွားမှ အခြားအာစီယံနိုင်ငံများလို အိုကေလာမှာပါ။
အိမ်ခြံမြေစျေး ရောင်းစျေး၊ ငှားစျေး ကျဆင်းသွားတာ အင်အယ်ဒီအစိုးရ စီးပွားရေးအခြေ ခံ အဆောက်ဦ Infra-Structurer ကောင်းကို အလွယ်တကူမမြင်နိုင်ပါ။ သတိမူသူ ဂူမြင်သလို မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခေါင်းငွေစက္ကူ ဗဟိုဘဏ်စနစ် အတော်ခိုင်မာနေပါပြီ။ အတိုးနှုန်းတွေ ၁၂% ကနေ 6% အထိ ကျသွားတော့ ပုဂလိကဘဏ်တွေမှာ အိပ်နေတဲ့ ကျပ်ဘီလျံ ၃၀၀၀၀ (US$20 billion) အတွက် ဘဏ်တိုးထိုင်စားခြင်း အစား၊ ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးချရတော့မှာပါ။
စီးပွားမကောင်းတာ မှန်ပါတယ်။ ကျဆင်းမသွားပါဘူး။ ဒီအတိုင်း ဆက်ထိန်း ပြီး ကောင်းဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု (ကုမဏီကောင်းတွေ) အမြောက်အမြား ဝင်လာနေကြပါပြီ။
အင်အယ်ဒီ အစိုးရတက်လာချိန် မြောက်မြားစွာသော သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ ကြိုဆိုတယ်။ အဓိက အကြောင်းရင်းက မိုဘိုင်းဖုန်းမှာ လိင်ဗီဒီယို (သက်ငယ်မုဒိမ်း၊ အကြမ်းဖက်) တွေကြည့်ပြီး သောင်းကျန်တဲ့ ခေတ် ပြသနာပါ။ အူကြောင်ကြား သက်ငယ်မိန်းကလေး တွေကို အင်အားသုံး လူမဆန်လုပ်ရက်တွေပါ။ ဗစ်တိုးရီးယား ၂နှစ်မိန်းကလေးအမှု တနှစ်ကြာ တနိုင်ငံလုံး ဝမ်းနည်းကြိတ်မနိုင်ခဲ ဖြစ်ရတယ်။ အမှုပြီးချိန် တရားခံမဖမ်းနိုင်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီး ထိပ်တန်းရဲအရာရှိကြီးများကို ရာထူးတိုး ရပ်ဆိုင်းပြစ်ဒဏ် ပေးလိုက်တယ်။ အကောင်းမြင် ရေးရရင်၊ ဗစ်တိုးရီးယား အမှုကြောင့် သက်ငယ်မုဒိမ်း သိသိသာသာ နည်းပါးသွားတာ အမှန်ပါ။ မိဘ၊ဆရာများနဲ့ ကလေးများ ကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ အင်အယ်ဒီအစိုးရ ဗစ်တိုးရီးယား အမှု နောက်ကွယ်မှာ ပြောစရာအများကြီး ရှိသော်လဲ သက်ငယ်မုဒိမ်း အများကြီးရော့ပါးသွားပါတယ်။
မမြင်ချင်ဆုံးပါ။ ပဲခူးမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဘီလစ်စာရေးမ အဖွားကြီးအိမ်လာဖျက်ခြင်း၊ မန္တလေးမြို့ပေါ်က တိုက်ခန်းဝယ်နေသူများကို ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အိမ်ဖယ်ရှားခြင်း စတဲ့ ဗွီဒီယိုများ လိုင်းပေါ်တက်လာတယ်။ ကျူးကျော်စျေး ကျိုက်ထီးရိုး၊ မင်းဘူးရွှေစက်တော် ပွဲတွေမှာ စည်ပင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ.. စသဖြင့် အင်အယ်ဒီအစိုးရလက်ထက်အထိ မြေ၊အိမ်သိမ်း အကြမ်းဖက်ခံရတာတွေ တွေ့ရတယ်။ သို့သော်လည်း ကြံခိုင်ရေးအစ်ုးရခေတ်ကလို ဘူတိုဇာနဲ့ ကျူးကြော်တွေ ဖယ်ရှားတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာ ကျူးကြော် စမတ်ကဒ်ထုတ်ပေးတဲ့ အိမ်ပေါင်း ၁သန်းနီးပါး ဖယ်ပေးစရာမလိုသေးတာလဲ အံသြစရာပါ။ အထူးသဖြင့် ငွေတိုးချေး၊ ၆လ ကျော်မပေးနိုင်ရင် အရောင်းစာချုပ်နဲ့ အိမ်ခြံ၊လယ်မြေတွေကို အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနဲ့ပေါင်းပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ ငွေရှင်များလုပ်ရပ်တွေ မရှိသလောက် နည်းသွားပါပြီ။ ကျေးလက်လူထုက ငွေချေးကုမဏီတွေ ဝင်ခွင့်မပေးတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေလဲ ငွေရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းစားခွင့်မရတော့။ ရဲနဲ့မြို့က ဘီလစ်စာရေးမ တွေ အနိုင်ကျင့်ခံရတာ နည်းသွားပါပြီ။ အင်အယ်ဒီအစိုးရ လက်ထက် ထွေအုပ်ဌာနကြီး ကလဲ ပြည်ထဲရေး(တပ်မတော်) လက်အောက်က အရပ်သားအစိုးရ လက်အောက် ရောက်လာပါပြီ။
စီးပွားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ တိုးတက်ဖို့ ပွင့်လင်းမြင်သာနိုင်သမျှ ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ လူတိုင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဖေ့ဘုတ်မှာ ရေးကြပါတယ်။ အရင်လို အဖမ်းမခံရတော့ဘူး ရာထူးပြုတ်ရုံပဲ ဆိုတော့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း တိုင်လာကြပါတယ်။ ဒုရဲမှုးကြီး မိုးရန်နိုင် အလုပ်ပြုတ်၊ ထောင်ကျသွားတယ်။ နာမည်ကျော် ရခိုင်၊မောင်းတော လူသတ်မှုကိစ္စ ဖွင့်ပြောတော့ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဖွင့်ပြောလို့ ဖမ်းခံ၊ တရားစွဲ ထောင်ကျပါတယ်။ အခုလွတ်လာပါပြီ။
၆၆(ဃ) ပုဒ်မ အမှုဖွင့်ခံရသူများလာလို့ အာမခံပေးနိုင်ကြောင်း ပြင်ဆင်ရတယ်။ ပွင့်လင်းလွန်းအားကြီးလို့ အာမခံမရတဲ့ ပုဒ်မနဲ့ ဖမ်းခံထောင်ကျသူ ၊ တရားစွဲခံရသူ သိပ်မရှိပါ။
ဥပမာ - စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်း ဆိုရင် ပြည်သူလူထုကို ဖေ့ဘုတ်ကအော်မဲ့အစား စနစ်တကျ တိုင်တန်းနည်းများနဲ့ တိုင်ပြပါတယ်။
ရဲစခန်းအမှုဖွင့် ရမယ် ဆိုတဲ့အဆင့် ကြတော့ မလုပ်ချင်တော့ပါ။ Wave Money ၊ ဘဏ်ငွေခိုးထုတ်၊ အကြွေးပြန်မပေး စတဲ့ ငွေ ၅သိန်းအောက် လိမ်ခံရသူများက ရဲစခန်းအမှုဖွင့်မှ ဆက်လုပ်ပေးမယ် ဆိုတော့ ငွေပဲ. အဆုံးခံလိုက်ကြပါတယ်။
မည်သို့ဖြစ်စေ မြန်မာတွေ ထိုင်ကြည့်မနေပဲ စနစ်တကျ တိုင်တတ်လာခြင်းက နိုင်ငံတိုးတက်လာခြင်းပါပဲ။
ပြည်သူလူထုက ရဲဆို လာဘ်စားတယ်၊ ၂ဖက်စလုံး တောင်းတယ်။ အမှုဖွင့်လဲ ပေးရတယ်။ အမှု ပိတ်မယ်ဆိုလဲ ပေးရတယ်။ စသဖြင့် အပြစ်တင်နေဆဲပါ။
အမေရိကန်၊ စင်ကာပူ တွေမှာတောင် ရဲတပိဖွဲဆိုရင် လေးစားပေမဲ့ လူချစ်ခင်မှုမရှိပါ။ အခု သမတထရန့် လက်ထက် ရဲတပ်သားက လူမည်းတရားခံကို လူအများရှေ့ လည်မြို ဒူးနဲ့ဖိသတ်ပြလို့ မြန်မာပြည် ရှစ်လေးလုံးလို လူထုအုံကြွ အရေးခင်းကြီး အမေရိကန်မှာ အချိန်တခုအတွင်း ဖြစ်လာတယ်။ မြန်မာလို ဆင်းရဲနိုင်ငံအဖို့တော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ နာမည် ပိုပျက်တာ မဆန်းပါ။ အထူးသဖြင့် တပ်မတော်သား ရဲချုပ်များက ရဲဥပဒေကို နားမလည်ခြင်း၊ နားလည်သော်လဲ စစ်တပ်လို အုပ်ချုပ်ခြင်းများ ရှိနေဆဲပါ။ အဂတိက အဆိုးဆုံးပါ။ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့နေရာ ရာထူးတိုး၊ နယ်ပြောင်း ပေးမယ်ဆိုပြီး ရဲမေ ၁၈ဦးနဲ့ အတူအိပ်တဲ့ ရဲချုပ်အမှု (June 2020) ကလည်း စိတ်ရောဂါရှိတယ် ပြောနေသံ ကြားရတယ်။ ငွေကို အလွန်တပ်မက်တော့ အဂတိ၊ လိင်၊ လိမ်လည်မှု မကောင်းတာ အကုန်လုပ်ရဲလာကြတာ မဆန်းပါ။ ပြည်နယ်များမှာတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ သြဇာ/အာဏာ မရှိရှာပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်တပ်များစွာ မြို့အနီးနားမှာ ရှိနေတော့ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များ ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းကြပါတယ်။ တိုင်းဒေသ ရဲတပ်ဖွဲ့များကတော့ စစ်တပ်မရှိတော့လို သြဇာ/အာဏာ အရမ်းကြီးနေပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုရင် လူတွေကြောက်ကြပါတယ်။ ခိုးမှုဆို ပညာပေးပြီး လွှတ်ပေးကြတယ်။
ရဲစည်းကမ်းနဲ့ အရေးယူရင် ထောင်၃နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ကျပါတယ်။ ကြီးလေးရင် အရပ်ဖက်မှာလဲ ထပ်မံတရားစွဲခံရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဓားပြ မများသေးပါ။ ရန်ကုန်ဘဏ်ဓားပြ ငွေထုတ်ကြီးယူသွားသူ ရက်ပိုင်းနဲ့ ပြန်ဖမ်းနိုင်ပါတယ်။ လူသတ်မှုများစွာ အံသြဖွယ် ဖမ်းနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သေနတ်မပြောနဲ့ ဓားကိုင် သွားရင်တောင် ရဲဖမ်းခံရတာ အများကြီးပါ။ ပြည်သူလူထုက မီဒီယာနဲ့ ကူညီဖမ်းဆီးပေးကြလို့ ဦးကိုနီ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူကို လူထုအားနဲ့ ရဲလက်အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ဝတ်စုံ အဆောင်ယောင်တွေ တောက်ပြောင်လာကြတယ်။ အထူးသဖြင် ကိုင်တဲ့ လက်နက်အကောင်းစား၊ စီးတဲ့. ရဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရဲကား တွေက သာမန်ထက် အဆင့်မြင့်. မြန်ဆန်ပါတယ်။ ရဲမေ အများအပြား ခန့်ထားခြင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်း အဂတိ နည်းပါးစေပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ဖို့ ပညာအရည်ချင်း ရှိရပါတယ်။ စစ်သားဖြစ်ဖို့ပညာတတ်စရာ မလိုပါ။ ရဲတပ်ဖွဲက ပြည်သူကြားမှာ တရားဥပဒေ ထိမ်းကြောင်းရတော့ ပညာတတ်၊ ဥပဒေ နားလည်ရပါတယ်။
မြန်မာနောင်း Myanmar-Now ရဲ့ ..မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ ဗီဒီယိုသတင်း (link)ကို ကြည့်ပါ။ သတင်းဆိုတော့ မကောင်းတာတွေများပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ က လူမှားဖမ်းပြီး နှိပ်စက်ညှမ်းပမ်း လို့ ရဲဌာနတွင်း စစ်ဆေး အပြစ်​ဒဏ် ပေးတဲ့ အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။ အခုချိန်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာ၊ မြန်ဆန်အောင် လုပ်လာကြမှာပါ။
စာရေးသူ ကိုယ်တွေ့ အရ စင်ကာပူနဲ့ အမေရိကန် ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ 911 ဖုန်ခေါ်တာတဲ့ ၁၅မိနစ်အတွင်း ရောက်လာတယ်။ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ရ လွယ်တယ်။ ဥပမာ သေးငယ်တဲ့အမှု မှတ်ပုံတင်ကပ်ပြား၊ ကားမောင်းလိုင်စင် ကျပျောက်/ခိုးနှိုက် ခံရရင် ရဲစခန်းမှာ. အမှုသွားဖွင့်ရတာ ၁၅မိနစ်ပဲ ကြာပါတယ်။ ရဲအမှုဖွင့်စာ ပါရင် လ.ဝ.က နဲ့ က.ည.န က အသစ်ပြန်လုပ်ပေးတယ်။ လာဘ်ပေးစရာမလို။
မြန်မာပြည်ကတော့ လာဘ်ပေးရင် အခုချက်ခြင်း လုပ်ပေးတယ်ခင်ဗျ။ စင်ကာပူ၊ အမေရိကန် မှာတော့ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာပါမှ၊ နောက်၃ပတ်အကြာ လာထုတ်ပါ။ အသစ်လုပ်ခ ဒေါ်လာ $100 အထက် ပေးရလို့ အစိုးရ ဝင်ငွေ ကောင်းတယ်။ ရဲလစာက ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး တလ $3000 (သိန်း ၃၀ ကျော်) လစာရတယ်။ အားကျနိုင်ပါတယ်။ စင်ကာပူ နဲ့ အမေရိကန်မှာ အိမ်အသေးလေး ငှားခ တလ ၁၅သိန်း၊ အခန်းလေးတစ်ခန်းငှားခ တလ ၅သိန်း ရှိပြီး ဘတ်စကား တစ်ခါစီး ကျပ် ၂ထောင်၊ ထမင်းတနပ် ကျပ်၅ထောင် ရှိပါကြောင်း လစာကောင်းသလို၊ ကုန်ကျစရိတ်လဲ ကြီးလှကြောင်း.. ရေးရင်း အဆုံးသတ်ပါတယ်။
မြန်မာနောင်း ရဲ့ ဗီဒီယို (link)
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - အဂတိနဲ့ အင်န်အယ်ဒီအစိုးရ Reviewed by MoeMaKa on 10:17 AM Rating: 5